Kusho ukuthini ukuboleka imali? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki Mietschuldner
Kuyini a Mietschuldner: Konke okufanele ukwazi ngezikweletu eziqashisayo
Abantu abaningi baseJalimane badonswa ngokweqile. Isikweletu ngokwaso asikhathelisi ukuphila, kepha uma kuqashiswa, ungase ulahlekelwe yindlu yakho futhi ungabi nakhaya. Njengomqashisi, kunzima kakhulu nanamuhla ukungena esivumelwaneni esisha. Ngenxa yalesi sizathu, isikweletu sokuqasha kufanele sigwenywe ngazo zonke izindleko. Uma unezikweletu eziqashisayo, isinyathelo esisheshayo siyadingeka, ngoba ukulinda kungenza isimo sakho sibi nakakhulu.
1 Ukuqasha akukhokhelwa? Kusukela nini lapho ubhekwa njengomqashi:
1.1 Yiziphi izindleko zokuqasha?
2 Ingabe umninikhaya angaqeda umboleki oqashisayo ngaphandle kwesaziso?
2.1 Uma ulahlekile izinyanga ezimbili zokuqashisa, kungabalulekile kuwe
3 Yile ndlela okufanele uyenze ngayo njengomqashi:
4 Nakhu ukuthi ungahlehlisa kanjani ukukhansela:
5 Izixhumanisi ezihlobene:
Ukuqasha akukhokhelwa? Kusukela nini lapho ubhekwa njengomqashi:
Ngokungena kokusebenza kwezinguquko zomthetho wezinhlalakahle ze-1.9.2001, ukuqashwa kufanele kukhokhwe kuze kube ngosuku lwesithathu ukusebenza kwenyanga kusengaphambili. Uma ungaphuthelwa le nkathi, usuvele ubophekile ngokomthetho njengesiqashi. Noma kunjalo, ukukhokhelwa kusengaphambili ngosuku lwesithathu lokusebenza kufanele kubhalwe phansi ngokubhaliswa. Futhi, uma ukhokha ingxenye kuphela yerenti ekupheleni konyaka, usesikweletu kumnikazi wendawo.
Yiziphi izindleko zokuqasha?
Akukwanele uma uxazulula kuphela ukuqasha okubandayo okukhonjisiwe ekuqashiselweni, ngoba ukuqasha kufaka phakathi ukukhokhiswa kusengaphambili kwezindleko zokusebenza ezifana nokulahlwa kwemfucuza kanye nokunikezwa kwamanzi. Ngokufanayo, kufanele ukhokhe ukukhokha kusengaphambili ngezinkokhelo zokushisa noma isilinganiso sendawo esivumelwaneni esivumelaniswe neholo lakho lenyanga. Ungakhokhi intela ngokugcwele, nawe ngokomthetho futhi ungumqashi.
Ingabe umninikhaya angaqeda umboleki oqashisayo ngaphandle kwesaziso?
Uma uwa ngemuva ngenkokhelo yenyanga eyodwa kuphela, awusongelwa ngokuqedwa ngaphandle kwesaziso. Noma kunjalo, umninimzi wakho angakhansela kahle uma uwela ngemuva kwerenti yenyanga engaphezulu kwenyanga eyodwa. Kulesi simo, umninimzi wakho kufanele ahambisane nesaziso sesimiso, esivame ukuba izinyanga ezintathu. Okufanele ukwazi: Ngisho noma uhlala ukhokhela iholo lakho ngesikhathi, indawo yakho ingaqedwa. Nokho, umninikhaya wakho unelungelo uma exwayisile kusengaphambili ngokubhala.
Uma ulahlekile izinyanga ezimbili zokuqashisa, kungabalulekile kuwe
Uma wena, njengesiqashi, ungakhokhiswa izinyanga ezimbili, umnikazi wendawo angase aqede isivumelwano sakho ngaphandle kwesaziso. Ukuqedwa ngaphandle kwesaziso nakho kungenzeka uma ukhokhela kuphela isaphulelo kanye nezinsuku zokukhokha ezimbili ezilandelanayo ngaphezu kwenkokhelo egcwele yenyanga ngemuva kwezinkokhelo. Kufanele uhlale ukhumbule ukuthi izizathu zomuntu siqu zokukhokhelwa kwesikhathi esisheshayo, njengokungasebenzi okungazelelwe, njll, ngeke ukwazi ukuvimbela ukuqedwa. Kuphela ezimweni ezihlukile, isibonelo, uma ungenalutho esibhedlela ngakho-ke awukwazanga ukukhokha intela yakho, izinkantolo zibukeka.
Yile ndlela okufanele uyenze ngayo njengomqashi:
Ungalindi kuze kube sekwephuzile kakhulu, kodwa xhumana nomninikhaya wakho ngokushesha uma uqaphela ukuthi awukwazi noma ngeke ukhokhe intela ngokugcwele. Abanikazi bezindlu abaningi bakhuluma nawe futhi bakunikeze ukubambezeleka kokukhokha noma ngisho nesitolimende. Uma usuqashiwe ngenxa yokufa kwabantu, njengokungasebenzi, ungasizwa ihhovisi lezenhlalakahle zendawo bese uthatha isikweletu sakho sokuqasha.
Nakhu ukuthi ungahlehlisa kanjani ukukhansela:
Uma, njengesiqashi, uxazulula izikweletu zakho esikhathini esiyizinyanga ezimbili ngemuva kokuthola isaziso sokukhishwa, ukuqedwa kuyaphela. Noma kunjalo, ungasebenzisa leli lungelo kuphela eminyakeni emibili. Uma usuvele wathola isaziso njengomqashi phakathi neminyaka emibili edlule bese ukhokhela isikweletu esiqashisayo ngemuva kwalokho, ukuqedwa kuqhubeka.
Isihloko esilandelayoamanothi promissory